Allgedo.com » 2012 » November » 20
Home » Archive Daily November 20th, 2012
Wararkii ugu danbeeyay ee xaalada Magaalada Garisa iyo Suuqii ugu weynaa oo gubtay
Wararka saaka ka imaanaya magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari Kenya ayaa sheegay in Suuq Mugdi oo xalay cidamda Kenya dab qabadsiiyeen uu bas beelay islamarkaana oo wali qaacayo. Suuqa ayaa waxaa la soo sheegayaa in hanti badan ay ku baaba’day dabkii ka kacay xay xalay awgiis. Ciidamada Kenya ayaa lagu soo waramaaya in garaceen oo ay jirdileen dad fara badan oo Somali ah kuwaaaso qaarkood laga...
Xero Kutaal Itoobiya oo noqotay xerada labaad ee ugu weyn qaxootiga aduunka
Tirada dadka Soomaalida ah ee qaxootiga ku ah deegaanka Dollo Adow ee dalka Ethiopia ayaa gaartay tira aad ubadan oo dhan 170,000 taasna waxaa ay ka dhigaysaa in xeradaas ay noqoto tan labaad ee ugu weyn dunida ee ay ku nool yihiin dad qaxooti ah, sidaas waxaa sheegtay hay’ada QM uqaabilsan qaxootiga ee UNHCR Tirada dadka cusub ee qaxooti ahaanta utagaya Dollo Adow ayaan ahayn mid kala joogsi...
Rabshado Wali ka jira Xaafada Islii iyo Haween badan oo la kufsaday
Rabshado bilowday labo maalin kahor ayaa wali ka soconaya xaafada ay Soomaalida degan tahay ee Islii Magaalada Nairobi. Boqolaal Kenyan ah ayaa isku dayaya in ay bartilmaameedsadaan Soomaalida kusugan xaafada Islii, kadib qarax sababay dhimashada 10 ruux iyo dhaawaca 30 kale oo labo maalin kahor Islii ka dhacay. Waxaa jira warar sheegaya in dad badan gaadiid lagala dagay kadibna la dilay, sidoo kale...
Ganacsade caan ah oo lagu dilay Magaalada Gaalkacyo iyo Howlgalo socda
Rag Hhubaysan ayaa gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ku toogtay nin ganacsade ahaa sida uu AOL usheegay mid kamid ah dadka deegaanka Goob joogayaal ayaa ku waramaya in ninka la dilay lagu magacabayay Aaden Faarax Dheere waxaana rag ku hubeysan bistoolada ku dileen xaafada Garsoor ee magaalaga Gaalkacyo. Ragii dilka fuliyay ayaa durbadiiba isaga baxsaday goobta, sida ay ku waramayaan...